Uzo mmebi na mmebi abiala ugbua na Isi | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraUzo mmebi na mmebi a di ugbua odi nma na isi obodo
09 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey
Uzo ukwu na elu di ugbu a karie n'isi obodo
N'okpuru ngwa “Monitoring Automation Center” nke Ankara Metropolitan Ọchịchị, a na-eme ka mmebi iwu na ihe agafe agafe ka mma. Site na usoro igwefoto guzobere site na ntuzi aka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, ihe ndị a na-egbochi na mmebi iwu na ihe ana - elebanye anya na 7/24 na-etinye aka ozugbo.
E guzobere “Nnyocha Nleba Anya N'ime Ime Obodo” iji belata nsogbu ndị dị na mmebi iwu na nleghara anya nke Ankara Metropolitan Munugwu iji nye ha njem na-agaghị akwụsị akwụsị na nchekwa nchekwa nye ndị na-agafe agafe na ndị ọkwọ ụgbọ ala n'okporo ụzọ akwara Başkent.
Site na ngwa nke Metropolitan Municipality City Aesthetics mejupụtara, a na-enyocha ihe na-agafe agafe na mpaghara dị iche iche nke obodo 149/7 site na otu etiti nwere kamera 24.
INVE INTERVENTION BY TEAMS
Ekele igwefoto etinyere n’uzo ebe a na-ahụ igwe mbuli elu na ndị na-ebuli elu, a na-enyocha ma na-edekọ ebe niile.
Site na sistemụ igwefoto nke nwekwara njiri mara ihe na ọgụ megide mmebi, ndị na-ebuli elu na-enweghị isi, ndị nwere nkwarụ na nkwarụ n'ihi ebumnuche dịgasị iche iche na-achọpụta ozugbo ma sonye na ndị otu ọrụ aka.
A GA-AKWUBKWỌ OZI N'IRI
Site na ntuzi aka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, igwefoto ndị a na-etinye n’elu mbuli elu na ndị na-ebuli elu n’obodo ahụ bu n’obi ka e jiri ya mee ihe na mpụga mpaghara ndị a, iji mebie ma gbochie ihe omume metụtara nchekwa nke ụmụ amaala.
N'ikwu na a ga-atụnye usoro a n'ime mmebi iwu na asọmpi 2020 dị mkpa na etiti etiti Başkent n'ime mmemme mmemme 262, ndị isi nke Ngalaba Aesthetics kwuru, “A ga-eji usoro ọdịyo na vidiyo mee ihe n'amaokwu ndị dị elu, nke ndị obodo nwere nkwarụ ga-eji mee ihe. Mgbe nsogbu dị na igwe mbuli elu, ndị ọrụ nọ na ebe njikwa ahụ ga-agwa onye ahụ okwu ma gwa ha ihe ha kwesịrị ime. N'ụzọ dị otu a, a ga - egbochi ụjọ ahụ ruo mgbe otu biara abịa wee wepụ ihe ọjọọ. ”
Ogologo Ogologo Na-enwe Nchebe Ugbu a
A na-echekwa nrịgo crossings na Batman
Nkwupụta Obi Ụtọ: Nkwadebe maka ọrụ uzo gabiga ókè na ihe ndị ọzọ na-agafe agafe
Ụzọ ụgbọ ala UK dị ugbu a na nchekwa
Ụzọ okporo ụzọ ga-adị nchebe ugbu a
Ụgbọ njem dị n'etiti obodo ga-adị nchebe na Manisa